A gọziwo anyị na ụlọ ọrụ anyị na mmekọrịta dị ukwuu na ndị ọkachamara na-ahụ maka ịre ahịa ọdịnaya - site na ndị nchịkọta akụkọ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ndị na-eme nchọpụta na ndị na-ede blọgụ, na ndị na-ede akwụkwọ na-edeghị akwụkwọ na onye ọ bụla nọ n'etiti. O were afọ iri iji chịkọta ihe ndị kwesịrị ekwesị ma wepụta oge iji kwekọọ na onye edemede kwesịrị ekwesị na ohere ziri ezi. Anyị echeela echiche maka iwe onye edemede ọtụtụ oge - mana ndị anyị na ha ga - arụ ọrụ dị egwu anyị agaghị achọ
Kwa afọ, m na-agbasi mbọ ike ma ọ bụ dee ederede amụma ma ọ bụ kwalite nke onye ọzọ. Kapost etinyela ihe omuma a - The Ghosts of Marketing Gara aga, Ugbu a na Ọdịnihu: Ebumnuche nke infographic anyị bụ iji nweta foto nke oge gara aga, ugbu a, na ọdịnihu dị anya nke ịzụ ahịa. Anyị nwere olile anya na ọ masịrị gị. Amụma na-emetụta m n'ihi na ha nwere ike ịtụ anya atụmanya nke na-agaghị enwe isi. M kwere na
N'ime nyocha ohuru nke Kapost nyere n'aka Aberdeen Group, nyocha chọpụtara na ndị ọchụnta ego ole na ole na-eche na ha na -emepụta ma na-agbaso ọdịnaya ha nke ọma. Na ọdịiche na-erigbu na-apụta n'etiti ndị isi ọdịnaya na ndị na-eso ụzọ ọdịnaya. Kapost na-akpọ oge mgbanwe ebe ọchịchọ dị elu mana atụmatụ ọgụgụ isi dị ụkọ Ọdịnaya Ọgba aghara. Ha haziri ihe ọmụma dị n’okpuru ebe a iji dina isi ihe mgbochi (na uru) iji guzobe usoro arụmọrụ ọdịnaya. Na ihe niile